Gabadh Muslimad ah oo ku hammineysa in ay ku biirto baarlamaanka Catalonia - BBC News Somali
Image caption Najat
"Waa wax laga murugooda in marka aad tvga fiirsato aadan ku arkaynin wajiyo dad madoow ah ama carab ah" ayay tiri Najat.
"Ma doonayo in caruurtayda ay la kulmaan kala bar wixii ay la kulmeen awoowayaashood iyo rubuc wixii ay la kulmeen waalidkood, waxaan rabaa in ay ku dhex noolaadaan bulsho laga wada tirsanyahay oo loo simanyahay" ayay intaas ku dartay.
Waxa ay ololaheeda doorasho waddaa xili lagu gudo jiro qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay go'aankii dowladdii xilka laga qaaday ee ahaa in ay ku dhawaaqaan madax banaani.
"Ujeedkayga ma ahan in aan noqdo qofkii ugu horeeyay ee islaam ah ee gala baarlamaanka, ee waxaan rabaa in aan noqdo qofkii koowaad oo dad badan matala" ayay tiri.
Musharaxa xisbiga Ra'isulwasaaraha Spain ee gobolka ninka lagu magacaabo Xavier Garcia Albiol, kaas oo lagu eedeeyay in uu jeediyay hadalo caadifad ah oo ka dhan islaamka iyo dadka kale, isaga oo yiri "Waxaan nadiifineynaa Badalona" oo ah magaalo ay ku badanyihiin dadka soo galootiga ah.
"Marka aad yartahay oo aad ku hadasho Spanish, dadka waa ku amaanayaan, waana ku jeclaanayaan, balse marka aad soo weynaato oo aad biloowdo in aad dood ka qeybgasho, waxa aad u muuqanaysaa qof tartan ku jira" ayay tiri Najat oo intaas ku dartay in aanan la ogolaan karin in sidii jiilkii hore oo kale ay noqdaan dad nadaafada uun ka shaqeeya iyo xamaaliga.